सान्चेजले अार्सनल छाेड्ने निश्चित, कहाँ हाेला उन्काे गन्तव्य? | Suvadin !
सान्चेजले अार्सनल छाेड्ने निश्चित, कहाँ हाेला उन्काे गन्तव्य?
बीबीसीका अनुसार सान्चेजको अबको गन्तब भनेको म्यानचेस्टर सिटी हुन सक्नेछ छ। सान्चेजलार्इ भित्र्याउन म्यानचेस्टर सिटीले पछिल्लाे वर्ष देखिनै इच्छा व्यक्त गर्दै अाएकाे छ।
Jan 12, 2018 12:15
एलेक्सिस सान्चेज र म्यानचेस्टर सिटीका म्यानेजर पेप ग्वार्डिअोला।
काठमाडाैं, २८ पुस – अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुका अनुसार आर्सनलका स्टार फरवार्ड एलेक्सिस सान्चेजले क्लब छाड्ने संकेत गरेका छन्। चित्तबुझ्दाे प्रस्ताव र क्लबले अफर गरे सान्चेजले यसै जनवरीमा आर्सनल छाड्न सक्ने मनसाय बनाइसकेकाे बीबीसीले जनाएको छ।
सिटीकाे व्यवस्थापन पक्ष र सान्चेजका एजेन्टबीच उनकाे ट्रान्सफरबारे छलफल जानकारी पनि एक रिपाेर्टमा उल्लेख गरिएकाे छ। त्यस्तै, पछिल्लाे वर्ष देखि पछ्याइरहेकाे म्यानचेस्टर सिटीले उनलाई २५ मिलियन पाउण्डको अफर गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएकाे छ।
तर, आर्सनलले प्रतिस्थापनका खेलाडी क्लबमा नभित्रिए सम्म सान्चेजलाई नबेच्ने अभिव्यक्ति दिँदै अाएकाे छ। सान्चेजले क्लब छाड्ने मनसाय गरेपछि आर्सनलले बोर्डूअक्सका २० बर्षीय ब्राजिलियन फरवार्ड मालकोमलाई क्लबमा भित्र्याउने तयारी गरिरहेको बताइएकाे छ।
यो सिजन आर्सनल मोनाकोका मिडफिल्डर थोमस लेमार भित्राउन असफल भएकाे छ। चिलीका २९ वर्षीय फरवाड सान्चेज सन् २०१४ मा बार्सिलोनाबाट आर्सनल भित्रिएका हुन्।
उनले प्रिमियर लिगमा यो सिजनको २१ खेलमा ८ गोल गरिसकेका छन्। त्यस्तै, अार्सनलकालागि १२२ खेल खेलेका सान्चेजले ६० गाेल गरिसकेका छन्।